Fampiharana Finday (App) Manome Fiarovana Hiadiana Amin’ny Fanolanana Ho An’ireo Vehivavy Indiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2013 23:02 GMT
Heloka efa mahazatra mihatra amin'ny vehivavy ao India ny fanolanana, nitombo avo roa heny ny tranga fanolalana teo anelanelan'ny taona 1990 sy 2008. Ao anatin'ny fitadiavam-bahaolana, mitodika amin'ny teknolojia ny mponina, tahaka ireo mora ampiasaina sy ny fampiharana finday maimaim-poana hoan'ny finday rehetra tsy ankanavaka.
Fampiharana Android ny Smart Suraksha App izay miompana amin'ny fanomezana fiarovan-tena goavana ho an'ireo vehivavy indiana. Afaka mandefa hafatra fanambarana loza ho an'ny finday dimy efa nosafidiana mialoha ny finday amin'ny alalan'ny fanindriana bokotra tokana. Amin'ny alalan'ny hafatra mitady vonjy, manome vaovao momba ny toerana misy ilay olona ny hafatra na dia tsy mandeha aza ny GPS amin'ilay finday. Araka izany, mahazo manantena ireo vehivavy fa hipaka any amin'olona hatrany ny antso vonjy ataon'izy ireo.
Vao haingana izay ny mpandahatra bilaogy indiana Blogadda no nikarakara fifaninanana bilaogy antsoina hoe “I wish I had Smart Suraksha (Te hahazo Smart Suraksha aho)” mba hanapariahana ny teny.
Kalyan Panja, mpifaninana, nanoratra momba ny fampiharana:
Ny tanjona voalohan'ny fampiharana dia ny hanao smartphones, fitaovana be mpampiasa ankehitriny, ho namana manan-danja ho fiarovana ny vehivavy manoloana ny loza mety hitranga na loza efa miseho, manome fanampiana tsotra sy haingana, tahaka ny fandefasana somaiso (SMS) miantso vonjy, sy fitambaram-pitsipika ahafahantsika mahafantatra ny fihetsika tokony atao raha ilaina. [..]
Ny fampiharana dia ahafahantsika mametraka lisitra laharana finday 5 handefasana hafatra tsotra tahaka ny hafatra mitady vonjy (anisan'izany ohatra: «Manana olana aho, antsoy aho”), ary koa mampahafantatra ny toerana misy anao, amin'ny fampiasana teknolojia GPS na amin'ny fampiasana tambajotra Wifi. [..]
Noforonina manokana izany mba hanamorana ny fandefasan-kafatra sy ao anatin'ny fotoana tena fohy indrindra, ary indrindra indrindra ny mba hahaizana mampiasa ilay fampiharana ihany koa amin'ny fotoan-tsarotra sy manahirana. Ny fisorohana no tena tanjona, miaraka amin'ireo toro-hevitra sy paika madinidinika izay tsy hanohintohina mihitsy ny fahalalahan'ny vehivavy, fa hanoro hevitra mikasika ny fihetsika tsara raisina amin'ny fotoanan'ny loza mba hanànana fiarovana.
Bilaogera Prava Vathi, mpifaninana hafa nanoratra hoe:
Noforonina manokana ho an'ny fiarovana ny vehivavy ity fampiharana ity, izay ahafahana manaraka ny toerana misy anao ary amin'ny fanindriana bokotra tokana no handehanan'ny hafatra ho an'ireo fifandraisana dimy efa napetraka mialoha ary koa ho an'ny polisy. Ahitana tolotra fanampiny manome ny antsipirihany momba ireo jiolahy izany, izay ahafahanao mandrakitra vaovao tahaka ny maodelin'ny fiara na ny akanjo hanaovany, amin'ny hafatra alefanao, raha toa ka ao anatin'izany toe-javatra [loza] izany ihany ianao. Ampiasao izany fampiharana izany ho fitaovana tsy ahafahanao ho lasa lasibatra mampalahelo.
Nanontany koa ilay bilaogera Confused Humanity raha misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ireo niharan'ny fanolanana ny fampiharana tahaka ny Smart Surashka:
Ilay mpiasan'ny BPO izay voaolana sy novonoin'ilay mpitondra fiara niova làlana sy nitondra ilay mpiasa aminà toerana lavitra. Raha nanana ity fampiharana ity izy, afaka nampandre ireo namany / fianakaviany na ny tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa niasany ve izy. Amin'ny tombatomba-toerana GPS, mety ho nahita ny toerana nisy azy ve izy ireo ary nahavonjy azy?
Amin'ny tranga fanolanana farany niseho tao Mumbai, afaka manindry ny bokotra ve ny lasibatra na ireo namany ary mampilaza ny orinasa iasan'izy ireo na ireo namany mikasika ny fihetsika hafahafa hita amin'ireo jiolahy [mpanolana], ary atao tsy fantatr'ireto farany ka mety tsy nitranga ve ny loza?
Nanolo-kevitra tolotra fanampiny ihany koa ilay bilaogera, tahaka ny fandraketana ny sarin'ilay mpanolana:
Raha mba mametraka rafitra vonjy-taitra na zavatra hafa ny fanjakana ankehitriny, izay manaiky sy manampy amin'ny hafatra vonjy taitra tahaka izany ( miaraka amin'ny toerana itrangan'ny loza) amin'ny alalan'ny fampilazana ny tobin'ny polisy akaiky indrindra na ny ekipa mpanao fisafoana (na toeram-pitsaboana), tsy rafitra sampana vonjy taitra bitika indrindra tahaka ny ‘911 ‘ihany ve izany?
Afshan Shaik nanontany tao anatin'ny tononkalo, “raha marani-tsaina kokoa noho ny fampiharana ny olona”:
Raha mba marani-tsaina kokoa noho ny fampiharana ny olona.
Raha mba manana herim-po hiatrehana ireo andian'olona ny tsirairay.
Raha mba mandresy ny tahotra ny fanahy, ny fihetsika ary ny herim-po.
Raha mba manana fahefana lehibe isika, mety ho nahatahiry ranomaso.
Raha notiavina sy narovana ary natera-dray ny tsirairay.
Raha mba manaiky hosahiranina ny olombelona ho solon'ny fampiharana!
Ny fahatokisan-tenanao no tena fitaovam-piadiana ho anao hoy i Knitha Urs, ary afaka manome fahatokisan-tena ho an'ny vehivavy ity fampiharana ity. Tsara kokoa ny miomana toy izay ho diso fanantenana, hoy i Swati nampahatsiahy.
Nanome ny lisitr'ireo fampiharana hafa i Shivani Gaya izay mitovy amin'ny Smart Surashka ihany.
Jereo ny momba ny fisoratana anarana mikasika ny fifaninanana ao amin'ny takelaka fametrahana fanehoan-kevitra amin’ity lahatsoratra ity sy ao amin’ity pejy Facebook ity.